प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सडक स्तरोन्नति - Awajonline Online Newspaper - Awajonline Online Newspaper
असार १८ , चरिकोट
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा सडक स्तरोन्नति गरिएको छ । गाउँपालिका भित्रका विभिन्न सडकहरूमा सोलिङ गरी उक्त कार्यक्रमबाट स्थानीय बेरोजगारलाई रोजगारी दिइएको गाउँपालिकाले बताएको छ ।
गौरीशंकर गाउँपालिकालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रू. ५९ लाख ४९ हजार रकम प्राप्त भएको थियो । सो रकमबाट विभिन्न वडामा करीब ३ किलोमिटर भन्दा बढी सडकमा सोलिङ सम्पन्न गर्न लागिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदिप कुमार खड्काले बताए । गाउँपालिकाको ९ ओटा वडामध्ये ६ ओटालाई रू. ७ लाख ४९ हजार ६२५ का दरले रकम विनियोजन गरी रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
वडा नम्बर १, २, ३, ४ र ५ तथा वडा नम्बर ७ का विभिन्न सडकको स्तरोन्नति गरिएको हो । सो कामका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत फाराम भरेकाहरूले रोजगारी पाएका छन् । कतिपय वडाहरूमा काम सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही वडामा काम सम्पन्न हुने चरणमा रहेको गाउँपालिकाको भनाइ छ ।
कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकालाई प्राप्त रकमको ७५ प्रतिशत काममा, १९ प्रतिशत निर्माण सामग्री खरीद, ५ प्रतिशत सुरक्षा सामग्री खरीद तथा १ प्रतिशत कन्टेन्जेन्सीवापत छुट्ट्याइएको छ ।
निर्माण सामग्री अन्तर्गत करीब रू. ११ लाख रकमको तारजाली खरीद गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्काको भनाइ छ । गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा वर्षात्को समयमा बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा पर्ने भएकाले विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारीस्वरूप तारजाली खरीद गरिएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ७० प्रतिशत रकम ज्यालामा तथा ३० प्रतिशतसम्म सुरक्षा सामग्री तथा अन्य सामग्री खरीदका लागि प्रयोग गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ ।